08/06/2018 - Page 4 sur 4 -
Mpianatra hiakatra “Codis” : Mitaky fanalefahan-tsazy
08/06/2018 admintriatra 0
Hohenoina ao amin’ny oniversiten’i Mahajanga ireo mpianatra maromaro voakasiky ny sazy ka tsy maintsy hiakatra « Conseil de discipline », na Codis. Mpianatra maromaro araka ny tatitra no fantatra voasaringotra tamin’ny fanakorontanana niteraka savorovoro, tao …Tohiny
“Ny vavaka manova zavatra”. Niverina am-bala ireo ondry nania! Izay no azo ilazana ireo depiote 73 milaza fa ho an’ny fanovana etsy amin’ny Parvis-n’ny Lapan’ny Tanànan’Antananarivo Renivohitra. Saika tazana teny amin’ny Lapan’ny Antenimieram-pirenena avokoa mantsy …Tohiny
Nampangaina ho mpilaza lainga hatrany ny gazety Triatra raha nitatitra ny vaovao mikasika an’i Mamy Ravatomanga. Akory anefa ny hagagan’ny maro rehefa nivoaka tamin’ireo hainoamanjery vahiny, ny raharaham-pitsarana miandry ity mpamatsy vola ny MAPAR ity, …Tohiny
Namonjy niverina eny amin’ny Antenimieram-pirenena daholo mantsy hono ireo solombavambahoaka 73 araka ny feo re. Ka voatery niverina am-bala ireo ondry nania! Sahirana mafy mihitsy mantsy izy ireo namono ny afo natsangany. Toraka izany koa …Tohiny
Nataon’ny fitondrana Tetezamita hatramin’ny farany mihitsy izay nampanginana sy nampanadinoina ny raharaha 26 Janoary na “Alatsinainy Mainty”, nandorana sy nandrobana ny tanàna manerana an’i Madagasikara, indrindra ny teto Antananarivo renivohitra. Hifanatrika ao amin’ny TVM androany ...Tohiny